Igbo, John: Lesson 126 - Azu azụ nke ọrụ ebube (Jọn 21:1-14) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 126 (Miraculous catch of fishes)
1 Mb͕e ihe ndia gasiri, Jizos mere Onwe-ya ka Ọ puta ìhè nye ndi nēso uzọ-Ya n'oké osimiri Taibirias. O kpugheere onwe ya otú a. 2 Simon Pita, na Tomas onye anākpọ Didimọs, na Nataniel onye Kena nke Galili, na umu Zebedi, na madu abua ọzọ nime ndi nēso uzọ-Ya. 3 Saịmọn Pita sịrị ha: "Ana m aga ịkụ azụ." Ha wee gwa ya, sị: "Anyị na-eso gị abịa." Ha wee pụta ozugbo wee banye n'ụgbọ mmiri. N'abalị ahụ, ha achọtaghi ihe ọ bụla.
Mgbe o bilitesịrị n'ọnwụ, Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha gaa Galili, ógbè ha, dị n'akụkụ Ọdọ Mmiri Tiberias. Ya, dika Ezi Onye-aturu, ga ebute ha ma zute ha n'ebe ahu, mana ohu ha n'anya choro na o mere ka ha hu ha anya, mgbe ha no na Jerusalem ka ha me ka egwu ha ghara idi egwu. Nke a bụ oge n'ehihie Sunday mgbe Ememe Ngabiga ahụ gasịrị, ya na udo nke Chineke na-ekele ha, ma zipụ ha ka ha zisaa ụwa ozi (Mak 16:7; Matiu 28:10).
Otú ahụ ka ndị na-eso ụzọ mgbe o nyere ọrụ ka ha jide ụmụ nwoke, na-emeghachi omume n'iwu ya? nke ebube nke Mbilite n'Ọnwụ gbanwee echiche ha ka ha wee mee ngwa ngwa iji zie ozi ọma nke ndụ ebighị ebi n'ụwa.? N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị. Ha laghachiri ọrụ ha nke ochie ma kewaa n'ime ìgwè, ụfọdụ naanị, ndị ọzọ na-akwado ndị ọkụ azụ.
N'otu uhuruchi, Pita gara azụ, sị ndị enyi ya, "Ana m aga azụ." Ọ hapụrụ ha ka ha kpebie ma hà ga-eso ma ọ bụ na ha agaghị eso. Ha sonyeere ya n'ọdụ ụgbọ mmiri, banye n'ụgbọ mmiri ma gagharịa n'etiti ọdọ mmiri ahụ. Ha na-agbanye ụgbụ ha ọtụtụ ugboro, na-agwụ ike abalị dum, ma ha ejighi ihe ọ bụla. Ha chefuru Jizos, si, "obugh m, unu apugh ime ihe obula."
4 Ma mgbe chi bọrọ, Jizọs guzoro n'akụkụ osimiri, ma ndị na-eso ụzọ Jizọs amaghị na ọ bụ Jizọs. 5 Ya mere Jisus siri ha, Umu-ntakiri, ùnu nwere ihe-oriri ọ bula? Ha si ya, É-è. 6 Ọ si ha, Tukwasinu ub͕u ahu n'aka-nri nke ub͕ọ, unu gāhu kwa. Ya mere, ha tụbara ya, ma ugbu a, ha enweghị ike ịdọrọ ya maka ọtụtụ azụ.
Jizọs ahapụghị ndị na-eso ụzọ ya, n'agbanyeghị na ha na-awagharị n'okporo ụzọ. O guzoro n'ikpere mmiri na-echere nloghachi ha. O nwere ike tinye iyak n'ime ụgbụ ha, ma ọ chọrọ ịkụziri ha na ha agaghị enwe ike ime ihe ọ bụla mgbe ha nwesịrị mmeri ukwu, ma ọ bụ laghachi ọrụ ha. Ha ekwekọrịtara na ya na ya; ọ bụ onye ọlụlụ ha, ma ha echefuola ya na nchegbu na nsogbu nke ụbọchị ma na-akpa àgwà dị ka a ga-asị na ọ nọghị na nke dị anya.
Ọ gwaghị ndị na-eso ụzọ ya okwu dị ka ndị ozi, kama dị ka ụmụaka ma ọ bụ ndị ntorobịa. Ha echefuola ọtụtụ ihe ọ gwara ha, ma ha etinyeghị iwu ya. N'agbanyeghị ụdị mwute a, Jizọs ji umeala n'obi ghara ịba ha mba, ma rịọ ha ka ha nye ha nri. Ha gha ikwuputa na ha achọtaghi ihe obula, nakwa na Chineke anọghi ha. Na nkenke ha kwetara mmejọ ha.
Ma mb͕e ubọchi nābia, Jisus biakutere ha; ọ dị ka à ga-asị na olileanya ọhụrụ na-abanye na ha. Ọ sịghị, "Echela ma ọ bụrụ na ị daa", ma ọ bụ "Gbalịa ọzọ, i nwere ike ịga nke ọma." Site n'iwu eze, o kwuru, sị, "Tụnye ụgbụ n'akụkụ aka nri nke ụgbọ mmiri ahụ, ị ga-ahụkwa ụfọdụ." Ọ bụ ezie na ha anọghị n'ime ọdọ mmiri ahụ, mana nso n'akụkụ osimiri, ebe nnukwu azụ dị ụkọ, ka o sina dị, ha gere ntị na ndụmọdụ a ma tinye ụgbụ ahụ n'aka nri.
Jizọs hụrụ azụ ahụ n'ime mmiri, dịka taa, ọ maara ebe a ga-ahụ ndị na-agụsi ya agụụ ike. Ọ ga-ezite gị ka ị gaa. Ọ sịghị, "Chọta onye ọ bụla n'ime ụgbụ gị", mana naanị, "Tụba ụgbụ Oziọma gị n'ebe m chọrọ gị, ị ga-ahụkwa ọrụ nke okwu m."
Ndị na-eso ụzọ na-erube isi n'iwu a dị iche iche, ma ha aghọtaghị Jizọs nke yiri onye nkịtị. Ma eleghị anya, ọ na-eji ekele nkịtị, ma o nwere ụda obi ike. Ya mere, ha nwere obi ike ma wụnye ụgbụ ha, ọ bụ ezie na ike gwụrụ ha, ma, lee, ụgbụ ahụ jupụtara. E nwere nduzi ime mmụọ nke Onyenwe anyị zitere ebe ọ na-eziga ha, ụgbụ ha jupụtakwara azụ, nke mere na ha enweghị ike iburu ha n'onwe ha. Ha chọrọ ndị ọrụ ibe ha nwere ezi obi iji nyere ha aka n'ịhụnanya.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, gbaghara nchegbu anyị na ndụ anyị, karịa ọchịchọ anyị ịmere ndị ọzọ maka gị. Anyị na-ekele gị maka ịbịakwute anyị, ọbụna mgbe anyị kpafuru. Ị na-eduga anyị ikwupụta nkwenye anyị. Kụziere anyị irubere okwu gị isi ma duru anyị gakwuru ndị na-achọ gị, ma duru ha banye na netwọk Oziọma gị, ka ha wee bụrụ nke gị ruo mgbe ebighị ebi.
Gịnị kpatara ọtụtụ ndị ji bụrụ ihe kpatara ihere nye ndị na-eso ụzọ?